Indesign နဲ့ပတ်သတ်သမျှအကြောင်းတွေ - MYSTERY ZILLION
March 2008 edited December 2010 in DTP
ကျွန်တော် Indesign ကိုခုမှစသုံးကြည့်နေတာပါ။ အသုံးပြုတာ အခက်အခဲလေးတွေ ဖြစ်နေလို့ ဒီမှာလာမေးတာပါ။
Indesign မှာ ပုံတွေခေါ်ထည့်ရင် ပုံတွေက မကြည်လင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ။ ဘယ် File Typeကပုံထွက်အကောင်းဆုံး
ဖြစ်မလဲ သိချင်ပါတယ်။ Indesign မှာ Layer တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ ကိုလည်း သိချင် ပါတယ်ဗျ။ လောလောဆယ်
ကျွန်တော် Brochure တစ်ခုလုပ်နေတာပါ။ အတွေ့အကြုံ ရှိပြီးသော ညီအစ်ကိုတွေ ပြောပြကြပါလား ခင်ဗျ။
ကျွန်တော်လည်း ဖြစ်တယ်ဗျ.. ဒါပေမယ့် print ထုတ်လိုက်ရင် ပုံတွေက ပုံထွက်လှပါတယ်... သူ့ရဲ့ preview မှာကတော့ မလှဘူးဗျ.. လုံးဝကို မကြည်လင်တာ... print ထုတ်ရင်တော့ အဲလိုမဖြစ်ဘူးဗျ..
ှုIndesign က PageMaker နေရာမှာ အစားထိုးလာတဲ့ software တစ်ခုလို့ မြင်ပါတယ် ....
PhotoShop မှာ ရနိုင်မယ့် Feature တစ်ချို့လည်း ပေါင်းထည့်ထားတာ .......
Indesign ကအတော်လေးကို ကောင်းပါတယ်။ ခုနောက်ဆုံး CS3 ဆိုရင် ပိုတောင်ကောင်းလာတယ်။
Layout လုပ်ရာမှာတော့ သူက Pro အဆင့်ထိ နားလည်ရင်နားလည်သလို လုပ်သွားလို့ရတယ်ဗျ။
အင်ဒီဇိုင်းက ပေ့ချ်မေ့ကာ အစားထိုးဆော့၀ဲအသစ်ပါ။ ပေ့ချ်မေ့ကာမှာ လုပ်ဆောင်နိုင်သမျှကို အင်ဒီဇိုင်းကလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပိုကောင်းတဲ့ တူး (tool) တွေလည်း ထည့်ပေါင်းထားပေးပါတယ်။
စောစောက ပုံမကြည်ဘူးဆိုတာ ပေ့ချ်မေ့ကာမှာရော အင်ဒီဇိုင်းမှာပါ အတူတူပါဘဲ။ အမှန်တကယ် ရီစလူးရှင်းကို လျှော့ပြီး ဖော်ပြပေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှ ဆော့၀ဲကိုသုံးတဲ့အခါ ပိုမြန်မှာမို့လို့ပါ။
ပေ့ချ်မေ့ကာမှာကတော့ File > Preference > General ကိုဖွင့်ပြီး
Graphic Display မှာ Gray out, Standard, High Resolution သုံးခုထဲက High Resoulution ကို Check လုပ်ထားပြီး ပုံကြည်အောင် ပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အင်ဒီဇိုင်းမှာကျတော့ ရုပ်ပုံပေါ်မှာ Right Click > Display Performance > High Quality Display ကို ကလစ်လုပ်ပေးလိုက်ရင် ရုပ်ပုံရဲ့ မူလ ရီစလူးရှင်းအတိုင်း ကြည်ကြည်လင်လင် မြင်ရမှာပါ။ (နဂိုရုပ်ပုံက ညံ့ရင်တော့ အဲဒီအညံ့အတိုင်းဘဲပေါ်ပါလိမ့်မယ်။)
Layer ကတော့ ဖိုတိုရှော့အတိုင်းပါဘဲ။ ဖွင့်/ပိတ်ရတယ်။ lock လုပ်ထားလို့ရတယ်။ စသဖြင့်ပေါ့လေ။ အဲ ... Selection လုပ်တာကျတော့ အီလပ်စထရေတာ (illustrator) နဲ့ တူပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ပေ့ချ်မေ့ကာမှာတုန်းက ရုပ်ပုံတခု၊ text frame တခုကို select လုပ်ချင်ရင် တခုစီကိုကလစ် (ဒါမှမဟုတ်) အဲဒီဖရိမ်တခုလုံးငုံမိအောင် မောက်စ်နဲ့ drag ဆွဲခဲ့ရတယ်။ သို့သော် အီလပ်စထရေတာနဲ့ အင်ဒီဇိုင်းမှာကျတော့ တခုလုံးငုံမိဖို့မလိုပါ။ drag ဆွဲတုန်းမှာ ထိမိတဲ့ object, frame တွေအားလုံးကို select လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဟိုနေ့က စာပြန်ရေးလိုက်တာ file type တခု ကျန်သွားသလားလို့။ ထပ်ပြီးရေးလိုက်ပါတယ်။
အင်ဒီဇိုင်းအတွက် အဆင်အပြေဆုံးကတော့ .psd ပါဘဲ။
(ပေ့ချ်မေ့ကာမှာတုန်းကတော့ .tif ကိုသုံးခဲ့တယ်။ အခုအင်ဒီဇိုင်းမှာလည်း .tif ကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ သို့သော် အဆင့်တဆင့်ပိုလာတာပေါ့။ ကျနော်ကတော့ .psd ကိုဘဲ တိုက်ရိုက်သုံးပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။)
.psd ရုပ်ပုံတွေထည့်သွင်းဖို့ကတော့ Ctrl+D (or) File > Place ကတဆင့် ထည့်ပေးရပါမယ်။
.ai (illustrator) ဖိုင်ကျတော့ တိုက်ရိုက် drag ဆွဲပြီး ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
(အင်ဒီဇိုင်းဖိုင်ကိုဖွင့်ထား ... .ai file ရှိတဲ့နေရာ ... My Document ဖြစ်ဖြစ် ... သူ့ကိုဖွင့်ထား ... အဲဒီ My Document ကနေ တိုက်ရိုက် drag ဆွဲထည့်နိုင်ပါတယ်။)
(ကျနော် corel draw မှာဆွဲတဲ့ရုပ်ပုံတွေကို File > Export လုပ်ပြီး .ai format နဲ့သိမ်းပါတယ်။ အဲဒီကမှတဆင့် အင်ဒီဇိုင်းကို ပို့ပါတယ်။)
ဒီလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူအများကြီးတင်တယ်ဗျာ နောက်လဲ မေးမေးမမေးမေးဗျာ သိသလောက်လေး ပြောပြပေးပါအုံးဗျာ ကိုဇူးလူး post တွေကို စောင့်မျှော်လျက်ပါဗျာ
Photoshop CS3 က ဖိုင်က CS2 နဲ့ဖွင့်ရင်ဖွင့်လိုမရဘူးဖြစ်နေပါတယ်..
Indesign CS5 key လေးကူညီပါဦးဗျာ။
ှုIndesign ကိုလေ့လာနေပါတယ်.. Lesson file တွေနဲ့လေကျင့်လို့ရရင် ပိုပြီး အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်..Lesson file လေးများ ကူညီပေးလို့ရရင် ဘယ်ဆို်ဒ်ကနေယူလို့ရမလဲဆိုတာ ကူညီပေးစေလိုပါတယ်ရှင်
font ေတြ indesign ဘယ္လိုသြင္းရမလဲ သိရင္ေျပာ ျပပါလားခင္ဗ်ာ/
indesign tutorials ေတြပါ အဆင္ေျပပါေစ